Nikaragoà: Ny Takaitra Navelan’ny Horohorontanin’ny Taona 1972 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2017 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, Aymara, Ελληνικά, English
(Fanamarihana: ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy dia efa nivoaka tamin'ny volana Desambra 2009)
Tamin'ny 23 Desambra 1972, namely an'i Managua, Nikaragoà ny horohorontany mahery vaika amin'ny maridrefy 6.2, namono olona 5.000, sy nandratra olona 20.000, ary tsy manan-kialofana 250.000. Ankizy tamin'izany fotoana izany ilay bilaogera Nikaragoàna, Homero, saingy manana ny fahatsiarovana ireo takaitra navelany, izay nosokajiany tamin'ny lahatsoratra vao haingana tao amin'ny bilaoginy Ventana de Homero [es] (Varavarankelin'i Homero).
Raha mbola afaka nipoitra tao amin'ny efitra ambadiky ny tranoko izahay, dia afaka mahita fa mena ny lanitra ary be rivotra be ao ivelany; nanomboka nitangorona ny mpiara-monina, niaraka tamin'ny akanjo-mandry ny ankamaroany, ary nitomany ny ankizy sasany satria natahotra. Nilaza tamiko tamin'ny feo matotra ny raiko hoe: “Horohorontany izany, ry zanako lahy, azo antoka fa rava i Managoà” ary marina izany.
Nandeha nitondra fiara ny fianakaviana mba hanamarina fa voaaro ireo ray aman-drenibe, izay nonina manerana ny tanàna. Niditra tamin'izany fiara izany, nahita fahoriana betsaka teny amin'ny lalana lasa maizina izy ireo .
Sambany aho nahita zavatra miadam-pihetsika, ary tahaka ny sarimihetsika mainty sy fotsy; nahoana ireo olona no mbola nirenireny foana teny an-dalambe; ny hafa kosa mandavaka mafy amin'ny tanana ny korontan-trano rava, mitady ireo fianakaviana voatototra ao ambanin'ny biriky simenitra. Nahita sarety hazo nitatitra ireo vatana mangatsiaka sy naratra aho ary nitaraina ny rehetra hoe, “hoento any amin'ny hopitaly izahay” kanefa, tsy afaka nanao na inona na inona izahay.
Nifarimbona ireo mpiara-monina mba hanome rano sy bodofotsy ho an'ireo izay nila izany, ary koa ireo ekipan'ny fikarohana mifarimbona mitady ny maty sy ny naratra. Nanamarika ihany koa i Homero fa tsy nisy na dia mpitandro ny filaminana ao amin'ny firenena aza teny an-dalambe, izay vao mainka nanampy ny korontana:
Nanararaotra ny maraimbe ireo mpangalatra mba handroba fivarotana sy mangalatra izay zavatra hitany; tamin'ny voalohany, tsy nahalala ny zava-mitranga aho, nahita lehilahy maloto sy tsy manao ambonin'akanjo mitondra fahitalavitra eny amin'ny lalana aho ary nilaza ahy ny raiko hoe: Mpangalatra ireo. Ahoana no ahafantaranao izany? hoy aho nanontany azy, dia namaly izy hoe, satria tsy misy olona ao anatin'izao toe-javatra izao mbola handeha hamonjy fahitalavitra. Vao fanombohan'ny halatra madinidinika izao izay hiverina amin'ny andro manaraka; raha nankalaza ny “Desambra” (Krismasy) ireo mpangalatra ao amin'ny manodidina, nangalatra ny fanampiana maha-olona ho an'ireo izay voakasiky ny horohorontany tao Managoà kosa [ny filoha teo aloha Anastasio] Somoza sy ny mpiara-dia aminy.
Nofaranany tamin'ny fandinihana ny lova navelan'ny horohorontany 37 taona lasa ny lahatsoratrany :
Tsy vitany hoe very zanaka lahy an'arivony i Nikaragoà, fa ny renivohiny, ny vadin'i Xolotlán ary tsy nisy governemanta nahavita namerina tamin'ny laoniny na ny afovoan-tanàna na ny hatsarany.